यिनै हुन बहादुर प्रहरी निरिक्षक डिबी लिम्बु,जस्ले यसकारण एआईजीका छोरालाई चड्काए ,यस्तो छ घटनाको नालिवेली… – पुरा पढ्नुहोस्……
यिनै हुन बहादुर प्रहरी निरिक्षक डिबी लिम्बु,जस्ले यसकारण एआईजीका छोरालाई चड्काए ,यस्तो छ घटनाको नालिवेली…
काठमाण्डौ। मदिरा पिएर ट्याक्सी चालकसंग झगडा गरिरहेका एकजना प्रहरीका उच्च अधिकारीका छोरा प्रहरी अधिकारीबाटै गम्भिर घाईते हुने गरि कुटिएकाछन् ।
नेपाल प्रहरीका एआईजी कमल सिंह बमका छोरा शुभम बमलाई प्रहरी निरिक्षक सहितको टोलिले नाकको डांडी नै भांचिने गरि कुटपिट गरेकाछन् । ड्यूटीमा खटिएका प्रहरीलाई गालीगलौज र कुटपिट गरेको आरोपमा शुभम बम शुक्रबार राति ठमेलबाट पक्राउ परेका थिए ।
एआईजीका छोराको संलग्नता रहेको भन्दैे घटना सुरुमा प्रहरीले गुपचुप राखेको भएपनि एआईजी बमको परिवारले बुधवारमात्र घटनालाई सार्वजानीक गरेको छ । एआईजी बमकी धर्मपत्नी महिमा बममे प्रहरीले गलत सूचना दिएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छिन् । महिमाका अनुसार शुभमले प्रहरीमाथि कुटपिट गरेको नभै प्रहरी निरिक्षक डिबी लिम्बु सहितको टोलिले शुभमलाई कुटेका हुन् ।
प्रहरी कुटाईबाट घाईते भएका शुभमले ट्याक्सी चालकसंग बिबाद गरिरहेका अवस्थामा प्रहरीले ट्याक्सी चालकको एकोहोरो कुरा सुनेर आफुलाई पक्राउ गरेको र कुटपिट गरेको बताएकाछन् । शुभमका अनुसार शुक्रबारका दिन उनी साथीहरुसंग ठमेल गएका थिए । राती अबेर सम्म मदिरा सेवन गरि घर फर्किने ट्याक्सी खोज्ने क्रममा चालकसंग उनको बिबाद भएको थियो ।
बालुवाटारबाट ४ सय ५० मा ठमेल आएका बमलाई फर्कदा ट्याक्सी चालकले १ हजार बढी भाडा मागेपछि उनको चालकसंग बिबाद भएको थियो । चलकसंग भाडामा बार्गेनिङ गरिरहेका बेला प्रहरीले मदिरा खाएर बाटोमा हल्ला गर्ने भन्दै आफुलाई बुटले हान्दै गाडीमा राखेको शुभमको भनाई छ ।
Prevआज जनता संग सिधा कुरा २०० एपिसोडमा : अब बन्ने छ देश ! रबिले यसो भने (भिडियो) सक्दो शेयर गरौ यो भिडियो !!
Nextयस्तो ठाँउ जहाँ ८०० मिटर लामो डर लाग्दो भिर चढेर स्कुल जान्छन् ! (भिडियो सहित)
मिस वर्ल्डको फाइनलमा शृंखला देखिइन नेपाली टिपिकल पहिरनमा हेर्नुहोस (लाइभ भिडियो ) सक्दो शेयर गरौ।
आजको राशिफलः बि.स.२०७७ साल असार ७ गते आइतबार इश्वी सन २०२० जुन २१ तारीख